_U-Snowman_, nguJo Nesbo, kwiithiyetha ngo-Okthobha. Uhlalutyo lokuqala. | Uncwadi lwangoku
_U-Snowman_, nguJo Nesbo, kwiithiyetha ngo-Okthobha. Uhlalutyo lokuqala.
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Izaziso, Inoveli emnyama
Umbhali uJo Nesbø. Ipowusta yemuvi kunye noMichael Fassbender, ophambili kuyo.
Okulandelayo 13 ngo-Oktobha i Inguqulelo yefilimu de Umntu weqhwa, la Isixhenxe (kwaye mhlawumbi ithandwa kakhulu) kwinoveli yomgcini waseNorway UHarry holewadalwa ngu Jo Nesbo. Yalathiswa yiSweden UTomas Alfredsson kunye neenkwenkwezi zomdlalo wehlabathi okhokelwa yiJamani -Irish Michael Fassbender. Ndiphosa a jonga kwimbali kwaye uhlalutye okusilindeleyo kubo bonke abafundi (abazinikeleyo okanye hayi) kaMnu. Nesbø.
4 Kutheni uyibona
Incwadana idibana ngoku 10 iminyaka ukusukela oko yapapashwa okokuqala kwaye sisiqendu sesixhenxe solunye lothotho lwamnyama oludumileyo lwangoku. Masikhumbule ukuba eyokugqibela, Unxaniwe, elidlulileyo laphuma Matshi 23. Sibe nethamsanqa lokuthetha noJo Nesbø xa wayengenile Barcelona ukuyiveza. Phakathi kweminye imiba Usixelele okuthile malunga nolungelelwaniso kwiimuvi.
Umntu weqhwa phawula a inqaku le-inflection eqokelela ukuvuka kwe Exelente inoveli yangaphambili, UMhlawuleli, ikhethwe ngabafundi abaninzi. Masithi Umjikelo wenkqubela phambili uye phambili eye yaphela (okwangoku) nge Unxaniwe. Ewe umfundi ngamnye unezinto azithandayo okanye angaqaqambisa ezinye izihloko.
El impikiswano isisa kuqala kwi Ngama-80 apho umama nomntwana wakhe ba okokuqala nge ngaphezulu umntu okhathaza ikhephu. Emva koko sibuyela kwi khona iphi enye umntwana fumanisa oko Umama wakhe unyamalele. Olona phawu lushiyekileyo kuye iya kuba sisikhafu sakhe asithandayo esijinga entanyeni ye ... indoda yekhephu.
KuHarry umngxuma sisenayo nangoku kuchacha kwisiphelo esothusayo (enye yezona zilungileyo kuzo zonke) ze UMhlawuleli kunye neyakhe ubudlelwane obuqhekekileyo kunye nalowo ubuthandayo ubomi bakhe, URakel fauke. Basengabahlobo kwaye ngoku unelinye iqabane.
Kwelinye icala, kwifayile ye- Iqela lokuzibulala leSebe lamaPolisa e-Oslo bahamba bezolile. A ilungu elitsha, eliqaqambileyo Katrine bratt, efihla ubuntu obunengxaki. Xa uHole kunye neqela lakhe beqala ukuphanda ngokwenzekayo, fumanisa ukuba kwiminyaka yakutshanje abafazi noomama abaninzi baye banyamalala. Kungekudala emva kokuba enye inyamalale kwaye kubonakala ngathi ezona zikrokro zibi zikaHarry zinokuqinisekiswa: yi umntu obulala kakhulu. Into abangakwaziyo ukuyikrokrela kukuba ikufuphi kangakanani kwaye ingahamba kangakanani.
Imifanekiso Yendalo ndinamalungelo kwifilimu kwaye ekuqaleni igama elidumileyo le- UMartin Scorsese ukuyalathisa. Ekugqibeleni yathatha indawo umlawuli waseSweden UTomas Alfredsson, kunye nembali ende kwilizwe lakhe lokuzalwa. Xa usayina Ndifake phakathi Ngo-2008, yafumana udumo kwihlabathi liphela. Kunye Imole (2011) ibanjiwe kwaye le ndoda ikhephu inokuba kukuphakama kwayo okuqinisekileyo. Ngaphaya koko, ukusukela i-cast yeyamazwe aphesheya (WaseMelika, waseBritane, owesiFrentshi kunye nowaseNorway), ukuba ubuncinci umlawuli waye oyaziyo indawo kunye nokusingqongileyo.
Kuba nali elinye icala lisiza ulwahlulo oluqhelekileyo lwezimvo phakathi kwabafundi abanolwazi kolu ngcelele. Inkqubo ye- Ukhetho lomdlali Ukwenza umlinganiswa rhoqo kwaye uchazwe ngokucacileyo njengoHarry Hole ibe nengxabano yayo.
Inqaku eliqhelekileyo lesivumelwano kukuba UMichael Fassbender ngumdlali obalaseleyo ngokungathandabuzekiyo. Kodwa ke xa uqala kuqala, unje Umzimba weViking wokusebenzisa iHole awuniki. Nangona kunjalo, Zingaphi izihlandlo ze-cinema ixhoba iinkcazo ezicacileyo zabalinganiswa boncwadi okanye one kuphuculwe? Ngokucacileyo, ababukeli abangenalo olo bhekiso loncwadi abayi kufumana mfazwe yokulwa malunga noku. Kwaye abafundi abazinikeleyo, abagxekayo okanye abahlambulukileyo abafundi baya kuba nazo zonke iingxabano zokuqinisekisa kwakhona uluvo lwabo, nokuba luphi na.
Inqaku lelokuba, njengesiqhelo, sijamelene nolungelelwaniso nayo yonke into ethetha ukuba mahluko (kubalulekile, ngokukaNesbø ngokwakhe) ngombhalo wayo wokuqala. Kwaye sonke siyazi lwahluke njani ulwimi lwecinematographic. Ngamehlo anenjongo nasemva kokubona itreyila (ngesiSpanish) eboniswe kule veki, ndiza kuthi abafundi abafumene amava bazakufuna ukuphinda bafundwe ukuvuselela iinkumbulo zethu. Inkqubo ye- ithoni ebandayo ke uNordic ngalo mzuzu uyaxatyiswa. Kwaye kuya kuba mnandi ukubona ukuba bayigcinile into ebandayo nenomtsalane wokuphela kwencwadi, ngazo zonke iziphumo kuHarry nakwabanye abalinganiswa.
Michael Fassbender (300, iMacbeth, isivumo sokholo sika-Assasin): UHarry Hole
Rebecca Ferguson (Intombazana kuloliweKatrine Bratt
UCharlotte uzuza (Umchasi-Kristu, UmthiURakel Fauke
UJakob Oftebro (Intlawulelo: Amatyala eSebe Q, uKumkani wokugqibelaUMagnus Skarre
UJim Simmons (Isixeko seenkwenkwezi): Arve iStp
Chloë Sevigny (Ibali laseMerika elibuhlunguUSylvia Ottersen
UJames D'Arcy (Dunkirk, Master kunye noMlawuliUFilip Becker
UToby Jones (I-Sherlock, Imithi ekhohlakeleyoGeft Rafto.
Ikwakhona phaya Val Kilmer kwaye i kufika kuYo ngokwakhe Nesbø, Inkuthazo yeegeeks esiza kuzama ukwahlula umntu ovela okwethutyana ehamba nenja.
Imithombo: IMDB-Imifanekiso ka-Getty-Imifanekiso yendalo iphela
Ukuphelisa ikhethe, liqinisekise okanye uligxeke. Ukuthatha uhambo oluzukileyo (kwabo bathanda ingqele) kwisixeko sase Oslo. Ukungena okanye ukuhamba ngentsomi Ivenkile yokutyela iSchrøder ukuba notywala obuyingozi kakhulu noHarry. Kodwa, njengesiqhelo, kwinto elula: ukuba nayo uluvo olucacileyo njengamanzi. Yintoni egqithisile, kunokwenzeka ukuba abafundi kolu ngcelele, kunye nomfanekiso owahlukileyo nongadluliswanga umntu ngamnye kaHarry Hole (kunye nabanye abalinganiswa), ungabachaphazeli Ezininzi. Ngokuqinisekileyo eyam ayitshintshanga iota enye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli emnyama » _U-Snowman_, nguJo Nesbo, kwiithiyetha ngo-Okthobha. Uhlalutyo lokuqala.
UCharlotte Gainsbourg njengoRakel Fauke??? Ngokweenkcazo, uRakel ungomnye wabo bafazi ukuba bajike bajonge kuye kwakhona kwaye ndicinga ukuba iyancwina ngakumbi kunokhetho lukaHarry.
Ezokhenketho kunye neencwadi: ziindawo ezi-7 zoncwadi onokundwendwela
Ukunikezelwa kweencwadi ezili-10